Imtaxaankii Sanad Dugsiyeedka 2010/11 ee Jamacada B. afrika Garowe oo la soo xiray – SBC
Imtaxaankii Sanad Dugsiyeedka 2010/11 ee Jamacada B. afrika Garowe oo la soo xiray
Jamacadda Bariga Afrika Fareecadda Magaalada Garowe waxaa maanta lagu soo gabo gabeeyay Imtaxankii Jamacada ee sanad Dugsiyeedka 2010-11 oo arday Gaaraysa 215 wilal iyo gabo isugu jira u dhamaystay imtaxaanka Kuliyadaha kala ah.
Kuliyada Maamulka iyo Ganacsiga BBA
Kuliyada Computer Science BCS
Kuliyada Shariicadda iyo Diraasadka Islaamka
Kuliyada Shareecadda iyo Qanuunka (LAW)
Waxaana Xusid mudan in ay wali u harasan yihiin Imtaxaanka arday oo galaya madooyin kale una dhamaanayo 14 bisha Jun ee sanadkan.
Maamulaha Jamacada Bariga afrika fareceeda Garowe Shiikh Maxamuud Xaaji Yusuf ayaa sheegay in ay Faraca Garowe ay u dhamatay ardayda afar Semester oo ah 2 sano oo ay muhimadii ay ardaydu ay ka sugeeyeen ay heleen wax lagu faanana ah tahay.
Waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay Jamacadu Fareceeda Kowaad ay ku leedahay Bosaso ayna galeen imtaxaan kuliyadaha 2010-11 ay u fariisteen Magaalooyinka Galkacayo Bosaso iyo Garowe arday Gaaraysa labo kun oo arday si habsami ahna ay hawshu ugu socotay waxbarasho.
Ardaydii dhamaysatay imtaxaanka ee Jamacada bariga afrika fareceeda ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin waxbarashadoodii intii ay ku soo jireen imtaxankana ka sugayan natiijo qeexaysa waxbarashadoodii oo u muujisa in ay waxbarateen.